Mon - Sat na7:00AM kusvika 9:00AM
Mumba Zvigadzirwa Mold
Mudhudhudhu & Scooter Mold
Mold Inspection Flow Chart
Mhoro, huya kuzobvunza zvigadzirwa zvedu!
Chii chinoda kutariswa pakugadzira mold
Sezvo isu tiri kusangana nemamwe maindasitiri ekugadzira mold, unoziva here kuti matanho ekugadzira epurasitiki mold chii? Ndeupi hunyanzvi hunodiwa hunodiwa vanogadzira mold muindasitiri yekuumba? Kunyangwe ichi chisiri chinhu chatinonyanya kunetsekana nacho, chinoda kunzwisiswa ....
Ko "burr" yejekiseni mold inoitika sei?
na admin pa 21-11-10
Majekiseni ekuumba zvigadzirwa zvinoreva mapurasitiki anodziya, epurasitiki uye akanyungudutswa nemuchina wekuumba jekiseni, wozoiswa mugomba reforoma yekuumba. Mushure mekutonhora pasi, iyo yakanyungudutswa inosimbiswa uye inogadziriswa, uye jekiseni rekugadzira muchina unoumbwa jekiseni. Fl...
Ongororo yezvinetso uye zvinokonzeresa jekiseni mold!
Iyo deformation, kupeta uye kumonyoroka kwezvakaremara zvigadzirwa zvinonyanya kukonzerwa nekuti iyo shrinkage rate munzira yekuyerera yakakura kupfuura iyo yakamira yakatwasuka panguva yekuumbwa kwepurasitiki, izvo zvinoita kuti zvikamu zvikanganiswe nekuda kweakasiyana shrinkage mazinga munzira imwe neimwe. . Zviri...
Nei mold ine zvimiro zvakaoma zvechigadzirwa ichida conformal kutonhora nzira?
Isu tinoziva kuti kuti uwane zvigadzirwa zvakaumbwa zvejekiseni, zvinokwana mapoinzi maviri anofanirwa kuchengetwa mupfungwa: panguva yekuumbwa kwejekiseni, kuyerera kwekunyunguduka mugomba kwakafanana sezvinobvira, uye tembiricha yegomba remadziro iyo mold yakafanana sezvinobvira. Kana iyo ...
Zvinokurudzirwa zvekuchengetedza uye kugadzirisa mold jekiseni
Kuenderera mberi kubva kuchinyorwa chekupedzisira, ini ndicharamba ndichitaura nezve chimwe chikamu chekurudziro yekugadziriswa kwejekiseni mold uye kugadzirisa. 1. Kana oparesheni ikaenda uye ichida kuvharwa kwechinguva, mold inofanira kuvharwa kudzivirira mhango nepakati kuti zvisaburitswe kudzivirira ...
na admin pa 21-08-19
Plastic dustbin molds ane zvakanyanya zvinodiwa. Kazhinji, kuchengetedza kwezvakatipoteredza PP zvinhu zvinonyanya kushandiswa, izvo zvinogona kuburitsa yakajeka pamusoro uyezve kuita firimu kudhinda uye mamwe marapirwo, inova yakakwira-magumo emarara. Asi kugadzira guruva rakanaka, kutanga kwezvose, kunaka kwe ...
Chii chimiro chepurasitiki mol
Nekufambira mberi kwesainzi uye tekinoroji, kugadzirwa kwezviumbwa zvepurasitiki zvinokurumidza munzvimbo dzakawanda. Plastic molds maturusi anofananidzwa nemichina yekuumba epurasitiki muindasitiri yekugadzira mapurasitiki kupa zvigadzirwa zvepurasitiki kurongeka kwakazara uye hukuru chaihwo. Nekuda kwe...
Kushandiswa kwemajekiseni mold
Nzira yekushandisa sei jekiseni mold zvakarurama? Aojie achakupindura! 1.Kuvhura nekuvhara mold speed uye low voltage protection adjustment Apo jekiseni mold yakazarurwa kana kuvharwa, mutemo wekuchinja kukurumidza "slow-fast-slow" 3 speed levels. Mukati mekuvhara mold, kuitira ...
Kurongwa kwemajekiseni molds
Ndeapi marudzi emajekiseni mold anogona kukamurwa kuita? Zvikamu zvakajairika zvinogona kupatsanurwa muzvikamu zvinotevera: 1.Kumwe kuparadzanisa pamusoro pejekiseni mold Kana mold yavhurwa, mold inofambiswa uye yakagadziriswa mold inoparadzaniswa, uye chikamu chepurasitiki chinotorwa kunze, icho chinonzi ...
Mold quality Mumakore gumi nerimwe apfuura, Aojie Mold yave imwe yemakambani makuru ekuChina. Mukati memakore gumi kusvika gumi nemashanu ekutanga ekuvandudzwa kweindasitiri yekuChina mold, iwo makambani aitarisa kumhando yeforoma uye manejimendi emhando akawana budiriro nekukurumidza. Aojie Mold iri ...
The New Technology Of Plastic Mold
na admin pa 21-07-23
Pane imwe nheyo inokosha pakusarudza mold simbi. 30%, uye chikamu mukupinza uye kutumira kunze kwe mold chakakwira se50 ~ 70%. Yezvigadzirwa zvepurasitiki Inoshandiswa zvakanyanya uye inopa musika wakakura kwazvo wepurasitiki molds. Mukuwedzera, inotungamirirwa ne ...
Nzira yekusarudza Mold Steel?
na admin pa 21-07-15
Pane imwe nheyo inokosha pakusarudza mold simbi. A. Mold simbi inofanira kusangana nemamiriro ayo ebasa. 1. abrasive resistance. Kana mapurasitiki achiyerera mugomba rekuumbwa, pachave nekukakavadzana kwakanyanya pakati pepurasitiki negomba repamusoro, uye nezvimwe ...
Aojie Mold Co.,Ltd.
Kuti uwane kubvunza nezve zvigadzirwa zvedu, ndapota siya e-mail yako kwatiri uye taura nesu mukati meawa makumi maviri nemana.